I-China Emiswe Isistimu ye-FUT Ceiling Grid ifektri kanye nabakhiqizi | Beihua
Uhlelo Olumisiwe Lwesikhashana Filing Ceiling Grid
1. Igridi yophahla inezimpawu zokuswakama-ubufakazi, anti-corrosion nokungahambi.
2. Inokucaca okuphezulu, i-main / cross tee iyalingana ngokuqinile, futhi ukubambisana kuqinile.
3. Inamandla okulethwa okuqinile, akukho kuguqulwa noma ukuqhekeka.
4. Ukufakwa kuyashesha, konga isikhathi sokufaka futhi kunciphisa izindleko zabasebenzi.
Iqoqo eliphelele lohlelo lokumisa ophahleni lwenziwe nge-tee eyinhloko, i-long cross tee, iDemo yesiphambano esifushane ne-angle angle. I-tee eyinhloko ingugqa oyinhloko wohlelo lophahla. Ubude be-tee main ngokuvamile buyi-3600mm noma izinyawo eziyi-12. I-long cross tee noma iDemo yesiphambano ixhumeke kuthayela eliyinhloko ngokusebenzisa ama-plugs at zombili iziphetho zalo, ngaleyo ndlela ihlukanisa iphrojekthi yonke yophahla ibe ngamagridi ayisikwele ambalwa osayizi ofanayo. Isetshenziselwa ukufakwa kophahla ngezinto eziphahla zikwele njengobumba lwamaminerali, ibhodi ye-pvc gypsum, uphahla lwe-aluminium, njll., Futhi idlala indima yokuxhasa nokuhlobisa kulo lonke uhlelo lwophahla.
1. Umsebenzi wokwamukela okuyisisekelo kufanele uqedwe ngaphambi kokuba kwakhiwe udonga lwamakhemikhali opende kanye nodonga lokuhlanganisa lwegypsum. Ukufakwa kwepaneli lokumboza i-gypsum kufanele kwenziwe ngemuva kokuphela kophahla, uphahla nokubekwa odongeni.
2. Izidingo zokudizayina lapho udonga lokwahlukanisa lunamabhande womcamelo ophansi, ukwakhiwa kwamabhande womcamelo phansi kufanele kuqedwe futhi kufinyelele ezingeni lokuklama ngaphambi kokufaka umthambo wepende.
3. Ngokusho komklamo, imidwebo yokwakha kanye nohlelo lwezinto ezibonakalayo, hlola zonke izinto zodonga lokwahlukanisa futhi ulenze liphelele.
4. Zonke izinto zokwakha kumele zibe nemibiko yokuhlola impahla kanye nezitifiketi.
Eminyakeni yamuva nje, isetshenziswe kabanzi emahhotela, izakhiwo zesikhumulo, eziteshini zabagibeli, eziteshini, ezinkundla zemidlalo, ezitolo ezinkulu ezitolo, amafektri, izakhiwo zamahhovisi, ukuvuselelwa kwezakhiwo ezindala, umhlobiso wangaphakathi, uphahla nezinye izindawo.
I-Long Cross Tee
Tee Lesiphambano Lesifishane
I-600mm / 610mm
Esedlule: Igridi Emisiwe Yophahla Olumisiwe
Olandelayo: Igridi Emisiwe Ye-Ceiling System
Iphayiphu ye-Rock Wool
Ithayili Elilinganisiwe Lokulinganisa Ingilazi